Abdii Amantiif Fi Obsa - Caboowanci.com-Oromia
Abdii Amantiif Fi Obsa
October 31, 2015 November 9, 2015 Nadhani	1 Comment
By Seena Abdissaa
Addunyaan nama tokkoofuu kan hin mijanne biyya rakkinaati. Rakkinni qooda fokkisaa kan namni fudhachuu mitiitii, maqaasheeyyuu dhaga'uu hinjaalanneedha! Garuummoo utuu rakkinni hinjirree, namni kan hin hojjanne, kan irribaa hin kaane, kan hin tattaafanne... of gataa fi mugaa ta'a! Rakkinni wal'aansoo nama barsiifti, hojiif nama si'eessiti, lafee namaa jabeessiti, seexaa nama keessa facaafti,...dhibooft­uu moofaa badhaafti! Namni kufee ka'ee, bu'ee ba'ee, dafqee dhama'ee kan fiigu rakkina mo'uufi.Yeroo tokko tokko garuu tulluun rakkinaa ol ka'ee, ija namaa dura maruun jiruu fi jireenya hadheessee, ifa saafaa dukkaneessee, abjuu egeree achii balleessee, kaayyoo naaffisee, yaada galteessee... tarkaanfii hintaane keessa nama buusa. Tarii "ebelu of ajjeese, summii dhuge, qalbii dhabe..." yeroo nuun jedhan ni dhageenya. Namoonni rakkina malee, abdii dura isaanii jiru yeroo arguu dhaban of balleessuu filatu.Yeroo dhiphuun ija baasee namatti dhaadatu, abdiinimmoo alaala dhaabattee "asan jiraatii of hin jibbin, of hin miidhin!" nuun jetti! Abdiin amilee kufe olkaafti. Lubbuu afaan boollaa geesse du'a oolchiti! Utuu abdiin hinjirree namuu lafarra hinjiru!!
Abdiin dhoksaa dha, aguuggii jala ykn dawoo duuba dhaabatti . Abbaan halle ishee hin argu. Fuulleen ittiin abdii hubatan jira-AMANTII! Amantiin ija, ija ittiin abdii argan. Ija ittiin haala qabatamaa har'aa keessaa ba'anii dhugaa bor dhufu ilaalan. Abdiin mucaa amantiiti!!
Yeroo haalli hamaan namatti marsu amantiin immoo, gaara rakkinaa gugguufsistee, qiliilee dukkanaa sanatti ibsaa namaaf qabdee, ija imimmaan jaamsuuf irraa fooggalu saaqxee..abdii alaala jirtu, eenyummaa ofii isa borii, ifa garasii boba'u namatti agarsiifti. Amantiin abdii har'a namarka hin jirre dhugoomsiti. Namni waan hojjatu tokko irratti yoo amantii qabaate malee utuma abdii akkamii argateeyyuu, albee ittiin of kutuuf ol fudhate lafa hinbuusu!
Abdiin "bor na bira geessee ni boqottaatii jabaadhu, kottu!" jettee waamti. Atuu waan suukaneessaa meeqa keessatti "bor garuu ani..bor... bor..." jechaa lubbuu of keessatti sossobdee akka as geesse yaadatteettaa?
Yeroo sagaleen abdii gurra namaa bira ga'u, MORMITOONNI immoo Matta'aa kuma meeqa qabatanii, dhugaa abdiin kennitu nama gansiisuuf falmii jalqabu. Yooma abdii qabaatte iyyuu; eessaan?, yoom?, attamitti?, Humna maaliitiin?, achi geessa??" ...ati moo! Dhuguma seeteey? Sin jedhu. Alasiif ragaa qabatamaa isaantu qaba. Sirkaa garuu dubbiitu bada! Jireenya Rakkisaa keessa yoo jiraatte illee holola sobduu hin dhugoomsin. Ammas mala sii kennuufan jedhaa!
Wanti hundumtuu deggarsa OBSAA tiin akka mo'amu yaadattee? Obsi hamileedha, humna ittiin gaara rakkoo yaabanii irra deeman, bowwaa salphinaarra utaalanii ce'an, moofaa yeelloo tarsaasanii abdii bira ga'an!! Abdiin obsa uumti!
Egaa waan dalagdu irratti Amantii qabaadhu,Xumura isaa akka argitu Abdii qabaadhu,Gufuu si mudatu hunda bira darbuuf Obsa qabaadhu.meeshaalee Waraanaa kana sadan of harkaa qabaattanii jennaan Hangam yoo ture iyyuu Xumurri keessan Injifannoo dhaan kan Faayame dha!!!
← New York mother throws baby
Amma yoomittii Meeshaa WayyaaneeTaanaa? →
One thought on “Abdii Amantiif Fi Obsa”
Waan jennun qabnu